ပရိတ်သတ်ကြီးကိုဒီတစ်ခါဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ တရှိန်ထိုးအောင်မြင်ကျော်ကြားလာတဲ့ Kpop Idol Group လေးတွေရဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ။ သူတို့အောင်မြင်မှုတွေ Popular ဖြစ်တာတွေကို ဆန်းစစ်ပြီး Rank လေးစီထားတယ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ ကိုယ့် Idol လေးတွေက Rank ဘယ်လောက်နဲ့ အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာလေး ကြည့်ပေးကြဦးနော် ပရိတ်သတ်ကြီး…
ဒီ အဖွဲ့လေးကတော့ WM Entertainment မှနေပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ Debut လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Girl Group လေးပါ။ သူမတို့ရဲ့ April လမှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ `Banana Allergy´ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးက အရမ်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Oh My Girl အဖွဲ့လေးက Ranking ရဲ့ နံပတ်၂၀ နေရာမှာရှိနေပါတယ်။
A post shared by OHMYGIRL (오마이걸) (@wm_ohmygirl) on Feb 24, 2018 at 3:13am PST
အခု နံပတ်၁၉ နေရာမှာရှိနေတဲ့ Idol Group လေးက BtoB ဆိုတဲ့ Boy Group လေးပါ။ သူတို့တွေကတော့ Cube Entertainment မှနေပြီး ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ Debut လုပ်ထားတာပါ။ BtoB ကတော့ ဆုတွေအများကြီးကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Fan တွေက Member တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ကိုနှစ်သက်သဘောကျကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်။ BtoB ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Eunkwang လေးကတော့ ဒီတစ်ပတ် Law of jungle မှာပါဝင်ထားပါသတဲ့ရှင်။
A post shared by BTOB 이민혁 (@btob_minhyuk) on Mar 6, 2017 at 1:57am PST
အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Girl Group လေး Momoland ကတော့ ၂၀၁၆နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကစတင်ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားလာခဲ့တာပါ။ ဒီ အဖွဲ့လေးကလည်း Kpop လောကမှာနာမည်အတော်ရနေတဲ့ တက်သစ်စ Girl Group လေးပါ။
A post shared by MOMOLAND (@momoland_official) on May 21, 2018 at 3:19am PDT
Drama အတော်များများမှာလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖူးတဲ့ အဆိုတော်လေး Park Hyo Shin ကတော့ Lee Sora နဲ့တွဲဖက်သီဆိုမှုအပြီးမှာပဲ မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတေယ်တစ်ယောက်ပါ။ ဇန်နဝါရီလမှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Sound Of Winter ဆိုတဲ့တေးသီချင်းလေးကလည်းအရမ်းကို ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘဲ April လက ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးခဲ့တဲ့ The Other Day ဆိုတဲ့ တေးသီချင်းကလည်း Korean Music Chart မှာ Top ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
A post shared by with.kyo (@with.kyo) on Apr 23, 2018 at 4:47pm PDT
Hwang Chi Yeul ဆိုတဲ့ အနုပညာရှင်လေးကတော့ China Prince လို့နာမည်ကြီးကျော်ကြားတဲ့ Kpop Idol တစ်ယောက်ပါပဲ။ I Can See Your Voice ဆိုတဲ့ Show ကနေပြီးအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ Hwang Chi Yeul ကတော့ လတ်တလောမှာ The Only Star ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့အတူ Music Bank မှာ ပထမဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
A post shared by 황치열 (ChiYeul Hwang,黄致列） (@chiyeul7102) on Jan 6, 2018 at 1:23am PST
Idol Group အတော်များများနာမည်အတက်အကျတွေဖြစ်နေရင်တောင်မှ ၁၀စုနှစ်တစ်ခုလုံးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အရမ်းကိုအောင်မြင်နေခဲ့တဲ့ Bigbang ဆိုတဲ့ အဖွဲ့လေးကတော့ နံပတ်စဉ် ၁၅မှာရပ်တည်နေတာပါ။ ယခုဆိုရင် Member တွေအားလုံးက စစ်မှုထမ်းတာဝန်ဆွေကိုအသီးသီးထမ်းဆောင်နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ သူတို့တွေနောက်ဆုံး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Flower Road ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကတော့ Chart အတော်များများမှာ Top နေရာကိုရယူထားဆဲပါပဲ။ လူတွေကသာစစ်ထဲမှာ နာမည်ဂုဏ်သတင်းနဲ့အောင်မြင်မှုက ကျသွားဖို့မပြောနဲ့ တုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်ဘူးရယ်..။ အသည်းစွဲ Fan တွေရထားတော့ ၁၀စုနှစ်တစ်ခုလုံး အကျမရှိ တရှိန်ထိုးအောင်မြင်နေတော့တာပဲဗျို့။
၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ Woolling Entertainment ကနေပြီး Debut လုပ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၆ယောက်ပါဝင်တဲ့ Infinite ဆိုတဲ့ Boy Group လေးကတော့ ၈နှစ်တာကာလအတောအတွင်းမှာ ဆုပေါင်းများစွာလည်းရရှိခဲ့သလို၊ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကလည်း အရှိန်မနည်းလှပါဘူး။ သူတို့တွေရဲ့ Fan တွေက Member Sunggyu တစ်ယောက်စစ်မှုထမ်းနေရတဲ့ကာလမှာတောင်မှ ကျန်ရှိအဖွဲ့သားတွေကို Support လုပ်ပေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Fan တွေရဲ့ အချစ်ကိုအတော်ရရှိထားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါ။
A post shared by INFINITE 공식 인스타그램입니다. (@official_ifnt_) on Aug 3, 2016 at 7:10am PDT
Blackpink လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အချောအလှမမ လေးယောက်ကိုမျက်လုံးထဲပြေးမြင်မိမှာပါ။ Blackpink ရဲ့ Fan တွေဟာဆိုရင် သူတို့ Idol Group က YG Entertainment ရဲ့အဖိုးတန်ရတနာတွေလို့ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ၂၀၁၇ပြီးထဲက Album အသစ်မထွက်ရှိထားတဲ့အတွက် Fan တွေက သူမတို့ရဲ့ Comeback Album ကိုစောင့်မျှော်နေမယ်ထင်ပါတယ်။
၂၀၁၄ခုနှစ် RBW မှဖွဲ့စည်းပြီး Debut လုပ်ထားတဲ့ Girl Group တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 2018 Dream Concert မှာ Starry Night ဆိုတဲ့သီချင်းလေးနဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးကို ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ရင်း လတ်တလောနာမည်ရနေတဲ့ အဖွဲ့လေးဆိုလည်းမမှားပါဘူးနော်။
A post shared by MAMAMOO (@mamamoo_official) on Mar 26, 2018 at 8:01am PDT
Cube Entertainment ရဲ့ အသစ်စက်စက် Girl Group လေးပါ။ Debut မလုပ်ခင်ထဲက အဖွဲ့ဝင် Soyeon ရဲ့ Produce101 နဲ့ Unpretty Rapstar ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေနဲ့အတူ လူသိများခဲ့တဲ့ အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ပါ။
A post shared by (G)I-DLE (여자)아이들 (@official_g_i_dle) on May 19, 2018 at 11:00pm PDT
၂၀၁၆ခုနှစ် Sofar Music ကနေပြီး Debut လုပ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဝင်၂ယောက်သာပါဝင်တဲ့ Idol အဖွဲ့လေးပါ။ Debut မတိုင်ခင် ၂၀၁၄ခုနှစ်လောက်တုန်းက Superstar K6 မှာပါဝင်ခဲ့ရင်းနာမည်ကြီးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ သူမတို့ရဲ့ Red Diary Page 1 Album လေးနဲ့ Fan တွေအသည်းစွဲချစ်ခံခဲ့ရတဲ့ သူမတို့၂ယောက်ကတော့ ခုလာမယ့် လထဲမှာ Red Diary Page2ကို Comeback Album အဖြစ်နဲ့ထုတ်ဝေဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
A post shared by 졍쓰 일상이야기? (@hey_miss_true) on Sep 28, 2017 at 2:00am PDT
Seventeen အဖွဲ့လေးကတော့ ၂၀၁၅ Debut မလုပ်ခင်မှာ သူတို့လေးတွေရဲ့ Reality Show မှနေပြီး Fan Base တွေအများကြီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်မှာ Seventeen TV ရုပ်သံမှနေပြီး Reality Show ပြုလုပ်ရာမှ အနုပညာလောကထဲရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Seventeen Project: Big Debut Plan ဆိုတဲ့ Reality Show ကိုရိုက်ကူးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ရက်လောက်ကမှ သူတို့တွေရဲ့ Call Call Call ဆိုတဲ့ Music Video အသစ်လေးကိုထွက်ရှိထားတာပါ။ ဒီ MV လေးကလည်း Viewer ပေါင်း ၂သန်းကျော်ရရှိထားပါသတဲ့ရှင်။
A post shared by SEVENTEEN (@saythename_17) on Mar 22, 2018 at 9:31pm PDT
၂၀၁၃ခုနှစ်က YG Entertainment ကနေပြီးစီစဉ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Reality Survival Program တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Win: Who is Next အစီစဉ်မှာ Team A အဖြစ်နဲ့ နာမည်တက်လာခဲ့တဲ့ Boy Group လေးပါ။ ဒီ Program လေးကို Public Voting တွေအများဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် Winner ဆိုတဲ့နာမည်လေးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
A post shared by winner & winnercity (@winnercity) on Mar 23, 2018 at 12:03am PDT
Source Music ကနေပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ Debut လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၆ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Kpop Girl Group လေးပါ။ Gfriend ကယခုဆိုရင် Time Of The Moon Night ဆိုတဲ့သီချင်းလေးနဲ့ အရမ်းကို Hit ဖြစ်နေတဲ့ Idol လေးတွေဆိုလည်းမမှားပါဘူးရှင့်။
A post shared by 여자친구 GFRIEND (@gfriendofficial) on Jan 7, 2018 at 6:12am PST
၂၀၁၄ခုနှစ်မှာ Happiness ဆိုတဲ့ Digital Single လေးနဲ့ အတူ Debut လုပ်လာခဲ့တဲ့ သူမတို့ကို Fan တွေက အရမ်းကိုချစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Red Velvet အဖွဲ့ဟာ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုပွဲကြီးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Kpop Idol Group အဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ဖျော်ဖြေပွဲအပြီးမှာ သူမတို့ရဲ့ အဖွဲ့ကြီးဟာအရမ်းကိုအောင်မြင်လာပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
A post shared by Red Velvet Official Instagram (@redvelvet.smtown) on Dec 2, 2017 at 12:06am PST
ကဲ… ပျိုမေတို့အသည်းစွဲ Exo အဖွဲ့လေးကတော့ နံပတ်၅နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ ၂၀၁၂ထဲက Top Boy Group အဖြစ်ရပ်တည်လာခဲ့တာယနေ့အထိပါပဲ။ Member တွေက China မှာဆိုရင် EXO-M နဲ့ Korea မှာဆိုရင် EXO-K ဆိုပြီး Global Idol Group တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ရပ်တည်အောင်မြင်လာခဲ့တာပါ။ ယခုဆိုရင် Horololo နဲ့ Blooming Day ဆိုတဲ့တေးသီချင်းတွေက EXO အဖွဲ့ရဲ့အရမ်းကိုအောင်မြင်နေတဲ့ Hit ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးသော Kpoper တွေရဲ့ အချစ်တော် ချောချောလေးတွေဖြစ်တဲ့ Twice အဖွဲ့လေးကတော့ Sixteen ဆိုတဲ့ Show မှနေပြီး အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ Girl Group တစ်ခုပါ။ ဒီအဖွဲ့လေးက Kpop Girl Group တွေထဲမှာ Popular အဖြစ်ဆုံးနဲ့ အောင်မြင်ဆုံး အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့လို့သတ်မှတ်ခံထားရတာပါနော်..။
A post shared by TWICE (@twicetagram) on Jan 13, 2017 at 5:21am PST
ဒီအဖွဲ့လေးကလည်း Win: Who is Next ဆိုတဲ့ Reality Survival Program ရဲ့ Team B အဖြစ်နဲ့နာမည်ရလာခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပါ။ သူတို့ရဲ့ Studio Debut Album ဖြစ်တဲ့ Welcome Back ကိုထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အရမ်းကို Hit ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ YG Entertainment ရဲ့ နောက်ထပ်၁၀စုနှစ်တိုင်တိုင်အောင်မြင်ဖို့အလားလာရှိနေတဲ့ Kpop Boy Group တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့လေးကတော့ Debut လုပ်ထားခဲ့တာ တစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးပေမယ့် အရမ်းကိုအောင်မြင်လာတဲ့ Fandom အားကောင်းကောင်းနဲ့ Kpop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NU’EST အဖွဲ့ရဲ့ MinHyun က Produce 101 ဆိုတဲ့ Program မှာထဲက Fanbase အဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်လာခဲ့တာပါ။ သူတို့အားလုံးရဲ့ Fan တွေအားပေးကြမ်းချက်က Debut လုပ်ပြီး မကြာခင်အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲ နံပတ်၂နေရာကိုရလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ကြပါတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ။
A post shared by Wanna One 워너원 (@wannaone.official) on Apr 16, 2018 at 6:00pm PDT
ကဲလာပါပြီ Kpop လောကဂုဏ်ဆောင် အသည်းလေးတွေ။ BTS အဖွဲ့ကိုတော့ The Most Popular Kpop Band အဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Billboard Music Award ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ Comeback သီချင်းလေးကိုသီဆိုဖျော်ဖြေပေးရင်း Kpop လောကဂုဏ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Idol တွေပါ။ လတ်တလောထွက်ရှိထားတဲ့ Fake Love ဆိုတဲ့သီချင်းလေးဟာဆိုရင်လည်း Billboard Top 10 မှာ နံပတ်၃နေရာမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Congratulations ပါ BTS နဲ့ Army တို့ရေ….။ ?
Kpop Idol Group ၂၀ မှာ ကိုယ့်ရဲ့ Idol တွေက Rank ဘယ်လောက်နဲ့ရပ်တည်နေလည်းဆိုတာလည်းသိခဲ့ကြပြီထင်ပါတယ်။
PREVIOUS POST Previous post: American Idol စင်ပေါ်က ဆွဲချခံရတဲ့ Katy Perry
NEXT POST Next post: Nicki Minaj နဲ့ Eminem တို့ ချိန်းတွေ့နေတာ ဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လား